Inqubomgomo yobumfihlo - InstaZOOM
Ikhaya » Idatha Yokuvikela Ipholisi
Sikwazisa ubumfihlo bakho. Ukuze kuvikelwe ukungaziwa kwakho, sithanda ukukwazisa mayelana nezinqubo zethu zolwazi oluku-inthanethi nokukhetha onakho mayelana nokuqoqwa nokusetshenziswa kwedatha yakho. Senza lesi saziso sitholakale kuwebhusayithi yethu nakuzo zonke izindawo lapho idatha yomuntu siqu ingacelwa khona ukuze kube lula ukuyithola.
Amakhukhi e-Google Adsense nawe-DoubleClick DART
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi avela ku-Google, umhlinzeki wokukhangisa wenkampani yangaphandle, ukunikeza izikhangiso. I-Google isebenzisa amakhukhi e-DART ukunikeza izikhangiso kubantu abavakashela le webhusayithi namanye amawebhusayithi ku-inthanethi.
Ungakwazi ukuvala ukusetshenziswa kwamakhukhi e-DART ngokuya ekhelini elilandelayo: http://www.google.com/privacy_ads.html. Ukunyakaza kwabasebenzisi kulandelelwa ngamakhukhi e-DART, angaphansi kwenqubomgomo yobumfihlo ye-Google.
Amakhukhi asetshenziswa iziphakeli zokukhangisa zezinkampani zangaphandle noma amanethiwekhi okukhangisa ukuze kuqoqwe ulwazi mayelana nemisebenzi yabasebenzisi kule webhusayithi, isb. B. Bangaki abantu abavakashele iwebhusayithi yakho nokuthi babone izikhangiso ezifanele. Instazoom.mobi akakwazi ukufinyelela noma ukulawula lawa makhukhi, angasetshenziswa abantu besithathu.
Ulwazi lomuntu siqu luyaqoqwa.
Uma instazoom.mobi vakashela, ikheli le-IP lewebhusayithi kanye nosuku nesikhathi sokufinyelela kuyarekhodwa. Lolu lwazi lusetshenziswa kuphela ukuhlaziya amaphethini, ukulawula iwebhusayithi, ukulandelela ukunyakaza kwabasebenzisi nokuqoqa idatha yezibalo zabantu evamile ukuze isetshenziswe ngaphakathi. Okubaluleke kakhulu, amakheli e-IP arekhodiwe awaxhunyanisiwe nolwazi lomuntu siqu.
Izixhumanisi kumawebhusayithi angaphandle
Sikunikeze izixhumanisi kule webhusayithi ukuze kube lula kuwe kanye nereferensi. Asinasibopho ngezinqubomgomo zobumfihlo zalawa mawebhusayithi. Kufanele wazi ukuthi izinqubomgomo zobumfihlo zalawa mawebhusayithi zingahluka kwezethu.
Lesi sitatimende singabuyekezwa noma nini ngokubona kwethu. Uma unemibuzo mayelana nenqubomgomo yobumfihlo ye instazoom.mobi sicela usithinte ku [i-imeyili ivikelwe]